I-Dolma noma i-Tolma - leli yigama lesidlo sikazwelonke sase-Armenia, esinomlando oneminyaka eminyaka. Lesi sidlo senziwe ngamanqabunga namaqabunga omvini. Wonke umuntu uyayithanda e-Armenia kusukela ezincane kuya ezinkulu, futhi mhlawumbe ngeke kube khona inkosikazi yase-Armenia engakwazi ukupheka i-dolma. Futhi zonke izindlu zikholelwa ukuthi kungcono kunomama noma ugogo ukuthi akekho emhlabeni ozopheka le dish ngokujabulisayo. Khumbula isiqephu sefilimu ethi "iMimino" lapho iKhachikyan (Frunzik) ithi iMimino (Kikabidze): "Roller jan, sizoya kuDilijan wami, umama uzopheka isixuku. Iminwe ihlamba! "? Indlela yokupheka i-dolma emagqabini amagilebhisi ngokusho iresiphi, evezwe e-Armenia izinkulungwane zeminyaka? Empeleni, akukho lutho oluyinkimbinkimbi lapha. Into ebaluleke kakhulu ukuthi inyama ihlanzekile futhi ikhuluphele, futhi amaqabunga amagilebhisi ancane futhi ahlanzekile. Kuphela kule nkathi izitsha zizobe zithande futhi zithokozise ngempela.
Ukulungiselela umvini kushiya i-dolma
E-Armenia, "i-dolma" nayo ibizwa ngokuthi i-dish, esiyibiza ngokuthi "iklabishi imiqulu", futhi nayo ihlotshaniswa nenyama yemifino egcwele inyama: ama-eggplants, pepper kanye utamatisi. Konke lokhu kuthunyelwa nge-tomato sauce nokushisa okuphansi. Noma kunjalo, i-dolma yama-cultic kunazo zonke ezilungiselelwe ngamaqabunga omvini. Yiqiniso, isikhathi esikahle kunazo zonke sesidlo esinjalo siqala ngoJuni. Yingaleso sikhathi lapho umvini ushiya khona. Udinga ukukhetha okulula kakhulu (okuluhlaza okomnyama kuyoba nzima) ubukhulu besandla somuntu wesifazane. Ngaphambi kokulungiswa kwe-dolma, amaqabunga awela emanzini abilayo imizuzu engu-2-3, asuswe ngokucophelela futhi agcinwe ngaphansi kwamanzi abandayo. E-Armenia lokhu isidlo samukelwa unyaka wonke. Mhlawumbe uzomangala futhi ucabange: "Indlela yokupheka i-dolma emagqabini amagilebhisi ebusika, uma ewa ekwindla, njengabo bonke abanye?" Abendlukazi base-Armenia bathole indlela yokuphuma kulokhu. Zinezinombolo ezinkulu zamagilebhisi omvini kanye nomanyolo ebusika kanje:
1. Udinga ukuthatha imbiza engamamitha amahlanu, ugeze kahle bese uyomisa.
Sula amaqabunga omvini, uwabeke ephepheni leshidi ukuze umswakama uphume.
3. Bafake emigodini yezingcezu ezingu-10-15 bese ugoqa nge-tube, okuyilowo nalowo angahlanganiswa nemicu ukuze angadluli.
4. Beka endaweni ebonakalayo embizeni bese uthele amanzi abilisiwe ngamanzi abilayo (1 litre amanzi amanzi 1 litre usawoti).
5. Faka inzalo emaminithini angu-8-10.
Ukulungiselela i-dolma ngesi-Armenia
Inkabi yomswakama (ungasebenzisa ingulube) - 1 kg.
Irayisi elijikelezayo - 100 g.
Anyanisi - ama-3 ama-pcs.
Basil omile noma fresh kanye ne-rosemary.
Pepper omnyama nebomvu, usawoti.
I-Butter - 50 g.
Amaqabunga omvini alondoloziwe - 1 isigamu-litre angakwazi.
I-Matzoni (ubisi obomvu) - 200 g.
I-garlic - i-clove engu-1.
Ababukeli abaningi ngemva kokubukela i-movie "iMimino" mhlawumbe banesithakazelo embuzweni wokulungisa i-Dolma emaqabunga omvini, okuchazwe "yiRubik jan". Noma kunjalo, abantu abaningi bacabanga ukuthi lokhu kuyidliva enzima kakhulu, futhi ngoba lamakhono akhethekile adingekayo. Akukho okulukhuni ukudala lesi sidlo, kepha uma usenqume ukupheka, udinga ukubekezela.
1. I-mince yengeze ilayisi namanzi amancane noma umhluzi wenyama, u-anyanisi omisiwe, imifino esisha noma eyomisiwe, izinongo, usawoti, uvuselele kahle futhi ulale endaweni epholile imizuzu engu-30.
2. Lungisa amaqabunga omvini. Uma usebenzisa okusemathinini, khona-ke udinga ukukhipha amanzi, ususe intambo evela kumabhubhu bese uwahlakaza.
3. Thatha iqabunga elilodwa, ubeke epulatifeni enezingxenye eziningi. Phonsa i-dolma efana ne-pancake. Sifake 1 okunezipuni zenyama enobisi phakathi kwekhasi, simboza kusuka ezinhlangothini zombili, bese siphenduka ithubhu eliqinile. Sibeka i-dolma phansi kwebhodlela embuthanweni, ngokuqinile kakhulu komunye nomunye. Kusukela phezulu njengomshini ufake ipuleti eguquguqukayo. Gcwalisa ngamanzi abilayo ukuze izinga lamanzi ngomunwe ongu-1 lidlule i-dolma.
4. Phala epanini emlilweni ohamba kancane emaminithini angu-40-50. Emva kwamathumba amanzi, faka ucezu webhotela, bese uzama umhluzi, uma kunesidingo, usawoti ukunambitha.
I-dolma eshisayo isetshenziswa nge-sauce eyenziwe nge-matzoni ne-garlic. Lesi sidlo kufanele sibe ngethebula lonyaka omusha e-Armenia. Manje nawe uyazi ukuthi ungalungisa kanjani i-dolma emaqabunga omvini, futhi ungamangaza izivakashi zakho nabathandekayo ku-Eva Wonyaka Omusha.
Kungani abesifazane bathanda izindlebe?
Uyini French Bulldog? Izibuyekezo mayelana zohlobo kanye izici zayo
Union: Umdlavuza kanye Gemini